Stella muchinjiko-chikuva uye yakavhurwa sosi Atari 2600 emulator | Linux Vakapindwa muropa
Emulators inokutendera iwe kunakidzwa mhando dzese dzekare mitambo uye yakanangana nezvose kubva kunyaradzo yesystem yako, pasina kuita kuti uwedzere kubatana kana kuwedzera Hardware kukombuta yako.
Somuenzaniso, unogona kutamba Nintendo 64, Nintendo Wii, Game Cube uye Sega mitambo paLinux ine chaiyo emulator. Kutenda kutevedzera, unogona kunakidzwa neyako mitambo yaunofarira yekare nemutongi wesarudzo yako.
Stella muchinjikwa-chikuva Atari 2600 emulator Yakagadziriswa pasi peGNU GPL rezinesi, zvakanyorwa muC ++ programming mutauro.
Stella aive yakatanga kugadzirirwa Linux naBradford W. Mott. Mushure mekuburitswa kweshanduro yekutanga, nekufamba kwenguva vanhu vazhinji vanobva pasirese vakabatana nechikwata cheStella chekusimudzira, icho, nekuda kweizvi, emulator yaive ichigadzirisa kune mamwe masisitimu anoshanda seAcornOS, AmigaOS, DOS, FreeBSD, IRIX , Linux, OS / 2, MacOS, Unix, uye Windows.
Iyo Stella emulator ine yakasarudzika graphical mushandisi interface uye kuti yakazvimiririra zvachose kune desktop desktop uye pamusoro pezvose zviri nyore kushandisa.
Stella isu inobvumidza iwe kumisikidza iyo marongero vhidhiyo, odhiyo, yekuisa, shandura zvivakwa zvemitambo, gadzira joystick kana controller, gadzirisa zviitwa zvekhibhodi, nzira dzekumisikidza, kuongorora maROM, pamwe nekupinda cheat kodhi uye tarisa matanda ehurongwa.
1 Stella maficha akakosha.
2 Maitiro ekuisa Atari Stella emulator pane Linux?
3 Maitiro ekubvisa Stella emulator kubva kuLinux?
Stella maficha akakosha.
Mamwe mabasa ayo emulator anotipa ndeaya anotevera:
Kuteedzera kweanodzora (joystick) yeAtari 2600 nenzira yekhibhodi kana macomputer ekudzora.
Atari 2600 keyboard yekuteedzera kuburikidza nekhibhodi.
Kuteedzera kweiyo Atari 2600 mutambo wepadhi uchishandisa mbeva.
Tsigiro yeAtari 2600 kutonga uchishandisa iyo Stelladaptor
Kuteedzera kwekutyaira kutonga kuburikidza nekhibhodi kana macomputer ekudzora.
Kuteedzera kweiyo «CBS Booster-Grip» kutonga kuburikidza nekhibhodi kana macomputer ekudzora.
Cartridge inotsigira ichishandisa iyo Atari standard mune 2K uye 4K mafomati.
Tsigiro yeNTSC, PAL uye PAL60 zviyero zveterevhizheni.
Maitiro ekuisa Atari Stella emulator pane Linux?
Iyo emulator inogona kuwanikwa yakananga mukati meiyo yepamutemo marekodhi eakasiyana ma distros.
Para isa emulator paDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tigoita unotevera kuraira mairi:
Kana iri Arch Linux uye zvigadzirwa, pane chinongedzo chatinoita:
Kana iri Fedora uye zvigadzirwa tinogona kuisa emulator nemirairo inotevera:
sudo dnf instalar stella
En kuvhuraSUSE isu tinokwanisa kuisa emulator kuburikidza neBS. Ingotinya bhatani «tinya gadza»Padhuze neshanduro yako yeSUSE.
Uyewo tinogona kushandisa masisitimendi anotipa kubva yayo yepamutemo webhusaiti, yeizvi isu tinongofanirwa kurodha pasi iyo yekumisikidza kune yedu system uye mhando yeapurani.
Kana iwe usiri kuziva kuti ndeipi dhizaini yako system, iwe unofanirwa kungo tevera unotevera kuraira:
Uye neizvi iwe unozoziva kana yako system iri makumi matatu kana makumi matanhatu nematatu.
YeDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa tinogona kuisa iyo deb package pamwe nemirairo inotevera:
sudo dpkg -i stella*.deb
Kana isu tine kunetsana neanovimba isu tinoita unotevera kuraira:
Ipo, yeFedora, yakavhurikaSUSE, CentOS uye zvigadzirwa isu tinoisa iyo rpm package pamwe nemirairo inotevera:
sudo rpm -i stella*.rpm
Maitiro ekubvisa Stella emulator kubva kuLinux?
Kana nekuda kwechimwe chikonzero iwe uchida kusunungura emulator kubva pakombuta yako, Iwe unofanirwa kuteedzera inotevera mirairo zvichienderana nekugovera kwauinako.
Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa:
sudo apt-get remove stella*
Fedora, yakavhurikaSUSE, CentOS uye zvigadzirwa:
sudo rpm -i stella.rpm
En Arch Linux uye zvigadzirwa:
sudo pacman -Rs stella
Kana iwe uchiziva chero mumwe emulator akafanana naStella kana akasiyana neAtari, usazeze kugovana nesu mumashoko, nenzira imwecheteyo kana iwe uchida kuti titaure nezve mumwe emulator, ita chokwadi chekuzivisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Stella muchinjikwa-chikuva uye yakavhurwa sosi Atari 2600 emulator